Sawirro: Doorashada laba kursi oo lagu qabtay Jowhar – Yaa kusoo baxay? | Arrimaha Bulshada
Home News Sawirro: Doorashada laba kursi oo lagu qabtay Jowhar – Yaa kusoo baxay?
Sawirro: Doorashada laba kursi oo lagu qabtay Jowhar – Yaa kusoo baxay?
Bulsha:- Magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka HirShabelle ayaa waxaa maanta lagu qabtay doorashada laba kursi oo ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya, kuwaas oo deegaan doorashadooda ay tahay maamulkaasi.
Kursigii horreeyey ee doorashadiisa la qabtay waxaa kusoo baxay Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh oo la tartamay musharrax Maxamud Cali Bariiise.
Cabdiraxmaan Maxamed ayaa helay 71 cod, halka musharixii la tartamayey ee Bariise uu isna helay 14 cod, sidoo kale waxaa hallaabay 13 cod, sida uu shaaciyey guddiga.
Sidoo kale kursiga labaad ee HOP#115 waxaa kusoo baxay Xildhibaan Cali Maxamed Cumar (Cali Balcad) oo markale dib loogu doortay baarlamaanka Soomaaliya
Cali Balcad ayaa helay 86 cod, kadib markii ay u tanaasushay Marwo Mulki Cabdullahi Islow oo la tartami laheyd.
Doorashada labadaan kursi iyo xubnaha kusoo baxay oo aan gelin tartan adag ayaa guushooda horey loo sii ogaa, maadaama kuraastan si gaar ah loogu xiray.
Si kastaba, tallaabadan ay qaaday HirShabelle ayaa qayb ka ah fulinta heshiiskii doorashada ee Muqdisho, gaar ahaan in la dhammeystiro doorashada Golaha Shacabka.